राष्ट्रिय समाचार – Page 21 – सप्तरंगी एफ एम
Home / राष्ट्रिय समाचार (page 21)
सप्तरङ्गी एफ.एम. / गौरादह /साउन २४ ,२०७५ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आज प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरे पनि संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालय भने खुलेका छन् । गृह मन्त्रालयले बिदाको सूचना नपठाएपछि संघीय सरकार अन्तरगतका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, नापी लगायतका कार्यालय खुलेका हुन । कसको आदेश मान्ने अन्योलमा रहेका संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी विदाको विषयमा खुलेर बोल्न सकेका ...
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २३/ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना नेता पक्राउको विरोधमा ५ दिने विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पछिल्लो पटक स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड नै पक्राउ परेपछि विप्लव सरकारप्रति आक्रोशित बनेका हुन् । पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड पक्राउ परेपछि महासचिव विप्लवले नेपाल बन्द सहितका साउन २५ देखि २९ सम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा ...
नेकपाको प्रवक्ताबाट दिएको राजिनामा फिर्ता लिन आग्रह गर्दा केपि ओली र प्रचण्डलाई नारायणकाजीले दिए यस्तो जवाफ
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २३/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनु भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी नेतृत्वले राजीनामा फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रहलाई उहाँले अस्वीकार गर्नु भएको हो । बैठकमा सहभागि एक सचिवालय सदस्यले, दुबै अध्यक्षबाट राजीनामा फिर्ता लिन प्रस्ताव आएको ...
श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा झापाको बिर्तामोडबाट एक व्यक्ति पक्राउ
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २१/ इच्छाविपरीत श्रीमतीसँग यौन सम्बन्ध राखेको आरोपमा प्रहरीले झापाको बिर्तामोड बाट एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । २२ वर्षीया श्रीमतीले २७ वर्षीय श्रीमान्माथि बलात्कार गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । श्रीमान्ले चाहना विपरीत जबरजस्ती यौनसम्पर्क गरेको भन्दै ती महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गरी वैवाहिक बलात्कार मुद्दा दर्ता ...
आगामी ४ बर्षमा गौरादहबाट फुस्को छाना बिस्थापित हुने
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन २०/ झापाको गौरादह नगरपालीकाले आगामी ४ बर्ष भित्रमा नगर भित्र बाट फुसको छाना बिस्थापित गर्ने भएको छ । नगरपालीकाले यसै आर्थिक बर्षमा नगर भित्र रहेका २ सय परिवारको घरमा भएको फुसको छाना हटाएर जस्ता पाता खरिद गर्न बजेट बिनियोजन गरेको नगर प्रमुख रोहित कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । नगरपालीकाले चालु आर्थिक बर्षमा नगर भित्र रहेका बिपन्न समुदायको ...
मोरङको पथरीशनिश्चरेमा कालोपत्रे सडक बनेको ३ दिनमै उप्कियो
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/साउन १७/ मोरङको पथरीशनिश्चरे १ शिखरचौक देखि हनुमान चौक सम्म २ सय ४० मिटरको कालोपत्रे सडक बनेको ३ दिनमै उप्किएको छ । नगरको ४८ घनमिटर काम ठेक्का मार्फत हिवा निर्माण सेवाक प्रोपाईटर खुम बहादुर थापालाई जिम्मा दिएको थियो । असार मसान्तमा हतारहतार नगरले पथरशनिश्चरे नगरको पथरीबजार बाट बहुमुखी र शिखर चौकबाट हनुमान चौकमा बिग्रिएको बाटो बनाउन भनेर ९ ...